Fitantanana tsy mazava sy fanodinkodinana : minisitra 13 teo aloha tokony hiakatra fitsarana avo (HCJ) | NewsMada
Fitantanana tsy mazava sy fanodinkodinana : minisitra 13 teo aloha tokony hiakatra fitsarana avo (HCJ)
“Misy raharaha fito tsy mbola voatsara eo anivon’ny Pac: misy fanodinkodinam-bolam-panjakana, fanomezana tombondahiny tsy mitombina… Manome toky izahay fa tsy maintsy voatsara amin’ity taona ity izy ireo.”
Io ny fanazavan’ny tonia voalohany mpampanoan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), Razafindrakoto Solofohery, teny amin’ny Bianco, Ambohibao, omaly. Mandray hatrany ny fitoriana momba ny kolikoly ny Bianco, na fanodinkodinam-bolam-panjakana, na heloka ara-toekarena…
Ny Fitsarana avo (HCJ) no mandray ny raharaha momba ny olona ambony. Alefa eny amin’ny Antenimierampirenena izany, andrasana fankatoavana vao tsaraina. Minisitra teo aloha 13 amin’izao no voakasik’izay.
Tsy kolikoly ihany no tsarain’ny Pac. Eo, ohatra, ny heloka ara-toekarena. Raha misy fanodinkodinam-bola mihoatra ny 50 tapitrisa Ar, any amin’ny Pac no itondrana azy. Hiarovana ny mpandraharaha hiasa sy hiaina malalaka izay.
Ny fanadihadiana no hahitana ny marina
“Maromaro ihany ny fitarainana”, hoy ny tale jeneralin’ny Bianco, Andrianirina Laza Eric, momba ny tale jeneralin’ny CNaPS teo aloha, ohatra. Tsy hoe tsy maintsy marina rehefa misy fitorohana. Izay no anton’ny fanadihadiana: hahitana ny marina. Eo am-panadihadiana an’izay ny Bianco. Misy raharaha hafa koa, nefa mbola voafehin’ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana ny Bianco.
“Efa tsy eken’ny Malagasy intsony ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, tsy ekeny intsony ny fanaovana kely tsy mba mamindro”, hoy izy. Izay fahasahiana izay no hahitana ny hoe tany tan-dalàna, satria hilamina ny firenena sy ny fiarahamonina rehefa tena ampiharina ny lalàna.
Tokony haseho fa tsy misy tsimatimanota eto
“Mitovy avokoa isika eo anatrehan’ny lalàna, tsy misy lehibe na kely”, hoy ny solontenan’ny firaisamonina sivily, Ramarosaona Faraniaina. Noho izany, miandrandra ny fahaleovantena sy ny tsy fitanilan’ireo rafitra miady amin’ny kolikoly izy ireo, miandry ny Fitsarana avo (HCJ) tena hanao ny asany. “Tokony hampiseho ny HCJ hoe tsy misy tsimatimanota eto”, hoy izy. Mitodika any amin’ny depiote ny rehetra: hanao sa tsia amin’ny raharaha 13 mahakasika minisitra teo aloha? Rehefa jerena ny lalàna mifehy ny tetibola, ambony be no ho ny an’ny Bianco sy ny Pac ny karaman’ireo ao amin’ny HCJ. Aiza ny tambin’izay karamabe izay?